Elekere shuga - textdị elu dị ka kristal dị mma - vidiyo
Quartz shuga bụ ihe nwere akụ dị mma dị n'ime ala dịka ezigbo kristal kristal mepụtara site na ihe okike nke micro-crystalline facets.
Elekere Sugar nwere akụkọ ihe mere eme na-ala azụ na 10,000 afọ, dịka e zoro aka na Paleo-Indian.
Ahụbeghị ma ọ bụ ahụta quartz sugar kemgbe mmalite 1900s. A na-ahụta nchoputa ọ bụla n’oge a bụ ihe dị ụkọ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime aha varietal dị iche iche bilitere site na agba nke ịnweta, usoro ndị a na-akpọ aha sayensị ugbu a na-ezo aka na obere nchekwa nke ịnweta. Agba bụ ihe njirimara nke abụọ maka mineral nke cryptocrystalline, ọ bụ ezie na ọ bụ njirimara bụ isi maka ụdị macrocrystalline.
Elekere shuga na Fluorite sitere na Madagascar